Foibe « Ny Fivoarantsika » : ofanina ho matihanina ny tantsaha tanora | NewsMada
Atoa Rakotomanga Samoelina, talen’ny foibe fampiofanana « Ny Fivoarantsika », Anjepy Manjakandriana, manofana tanora ho matihanina amin’ny fambolena sy fiompiana. Fanazavana nomeny, araka ny tanjona nofaritan’ny « Réseau Soa ».
*Gazety Taratra : Foibe fampiofanana « Ny Fivoarantsika », nanomboka oviana ary ahoana ny fomba nananganana azy ?
-Rakotomanga Samoelina : Tsara marihina aloha fa niainga manokana avy amin’ny hetaheta sy herimpon’ny tantsaha ny nanangana ny foibe fanofanana, tsy nisy famatsiam-bola hafa na taiza na taiza, ary nanomboka niasa ny taona 2008 hatramin’izao, manofana tanora ho tena matihanina.
*Ahoana indray ny fepetra takina amin’izay maniry te hanaraka izany fiofanana izany ?
– Tsy misy fetrany loatra ny fari-pahaizana takina amin’ny tanora izay te hanaraka fiofanana. Hita ao avokoa ny rehetra, misy nijanona tany amin’ny ambaratonga faharoa, misy ny manana bac. Mialoha izany anefa, tsy maintsy misy ny dinika mialoha ifanaovana amin’ireo ray aman-drenin’izay hanaraka fiofanana sy amin’izy ireo ihany koa. Tanora 14 hatramin’ny 29 taona izy ireo ka hita fa ny 90 %, vonona ny ho matihanina. Voafetra ihany koa ny isan’ny raisina.
*Maharitra hafiriana ny fiofanana ary inona avy ny taranja hanofanana azy ireo ?
– Fanofanana momba ny fiompiana sy ny fambolena, mazava loatra. Tsy misaraka amin’izany ny fanajariana amin’ny ankapobeny, fianarana fandrafetana vy sy hazo mifandraika amin’ny fambolena sy ny fiompiana ihany, famatsiana herinaratra, fitantanan-draharaha, informatika, teny frantsay sy anglisy. Roa taona ny faharetan’ny fiofanana arahina fampiharana teknika.
*Amin’ny maha teknisianina anao ao anatin’ny « Réseau Soa », ahoana ny fahitanao ny politikan’ny fampandrosoana ny any ambanivohitra eto amintsika ?
-Politika mitongilana no misy, izany hoe, ny afovoan-tany ihany no akaiky sy lohalaharana amin’izay politika faritan’ny fanjakana. Na izany aza, mbola tena lavitra ezaka ny fampandrosoana ny any ambanivohitra.